Shanta Talooyin ee Ugu Sareeya Dhisida Istaraatiijiyadda Mawduuca Hoggaanka Fikirka | Martech Zone
Cudurka faafa ee 'Covid-19' wuxuu iftiimiyay sida ay u fududahay in la dhiso - loona burburiyo summad. Xaqiiqdii, dabeecadda sida ay magacyadu u wada xiriiraan ayaa is beddeleysa. Dareenku marwalba wuxuu ahaa darawal muhiim u ah go'aan gaarista, laakiin waa sida magacyadu waxay ku xirmaan dhagaystayaashooda kuwaas oo go'aamin doona guusha ama guuldarada adduunka kadib Covid.
Ku dhowaad nus ka mid ah go'aan-qaatayaasha ayaa sheegaya in fikirka hoggaanka ururku si toos ah gacan uga geysto caadooyinka wax iibsigooda, haddana 74% shirkadaha ma laha istiraatiijiyad hoggaamineed oo feker ah meel.
Edelman, 2020 B2B Fikirka Saamaynta Hogaaminta
Boggan, waxaan ku sahmin doonaa shan talooyin oo sare si aan u dhiso istiraatiijiyad hoggaamineed oo lagu guuleysto:
Talo 1: Xoogga saar waxyaabaha ay daneeyayaashu ka doonayaan shirkaddaada
Waxay u ekaan kartaa su'aal aasaasi ah laakiin fekerka hoggaamintu wuxuu ku saabsan yahay muujinta khibradda shirkaddaada, halkii aad ka horumarin lahayd shaqsiyaadka. Si taas loo sameeyo si wax ku ool ah, waa inaad ogaataa dhibaatooyinka haysta dhagaystayaashaada ay wajihi doonaan seddex, afar, shan sano kahor. Habka hogaaminta fikirka ee ku saleysan hanaan cilmi baaris tayo iyo tayo leh, oo siineysa aragti istiraatiiji ah suuqa, waxay hubin doontaa in howlaha isgaarsiinta aan la qaban hawraar, laakiin loogu talagalay dhagaystayaashaada iyada oo loo adeegsanayo habab xog-wade ah oo sheeko-sheeko ah.
Talada 2aad: U Arag Arag cad oo ah halka ay fekerka hoggaamineed saameyn ku yeelan doono qaybta iibka
Gaar ahaan jawiga B2B, iibsigu wuxuu noqon karaa mid adag oo dhib badan. Hogaaminta fekerka ayaa door muhiim ah ka ciyaari karta muujinta sababta aad ugu xulatay shaqada. Tani sida muuqata waa isku dheelitirnaan jilicsan maxaa yeelay - si ka duwan suuqgeynta waxyaabaha ku jira - hoggaanka ayaa u maleynaya inuusan sare u qaadi karin wax soo saarka ama adeegyada. Cilmi baarista warshaduhu waxay kasbataa quluubta iyo maskaxda, iyagoo abuuraya qiimeyn ku saleysan waxyaabaha ugu muhiimsan dhagaystayaashaada.
Talo 3: Baro Waxa Kaa Dhigaya Inaad Kugu Kalsoontahay
Waqti ayey qaadataa si loo kasbado kalsoonida, gaar ahaan suuqyada buuxa. Maadaama isgaarsiinta dhijitaalka ahi dhab ahaantii ahayd habka keliya ee lagu gaari karo dhagaystayaasha inta lagu gudajiray aafada, dadka waxaa ku qulqulay waxyaabo ay ka mid yihiin, taasoo keentay daal la’aan. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad fiiriso ku biirista xoogagga leh saamileyaasha warshadaha sida hay'adaha ganacsiga, macaamiisha, iyo la-hawlgalayaasha si aad u qaadatid aragti wadaag ku saabsan hoggaaminta fikirka. Tani waxay gacan ka geysan doontaa dhisidda aaminaad deg-deg ah oo haddii kale qaadan karta sannado in la dhiso.
Talada 4: Ha U oggolaan Istaraatiijiyadda Mawduucaagu inay Daal ku dhacdo
Imaatinka mowduucyada cusub waxay caqabad weyn ku tahay inta badan hoggaamiyeyaasha fekerka, laakiin haddii aad uga soo dhowaato xagal iskaa wax u qabso ah, markaa derbi aad uga dhaqso badan ayaad ku dhaceysaa. Suxuufiyiinta, tusaale ahaan, waligood kama dhamaado waxyaabaha ay sheegaan maxaa yeelay waxay raadinayaan wax cusub oo ka dhacaya aaggooda khibrada leh. Warkuna waligiis ma istaago. Ka fikir sida suxufiga, u kala hormari cilmi-baaris joogto ah oo keeneysa faallo cusub oo xeel dheer 'wararka' mowduucyada muhiimka u ah daneeyayaashaada.
Talo 5: Saxnimada lama Been Abuuri Karo
Marka la soo koobo: tus dhagaystayaashaada inaad ku jirto muddada dheer. Hogaaminta fekerka maahan inaad tusto qof walba sida aad caqli iyo guul u tahay. Maaha inaad noqoto mid xanaaq badan aawadeed. Hoggaanka fikirka wuxuu ku saabsan yahay muujinta khibrad iyo muujinta inaad ku dhowdahay inaad xalliso dhibaatooyinka maanta iyo mustaqbalka labadaba. Hubso in mawduucyada aad ka kooban tahay, codka codka iyo qodobbada xogta ay yihiin kuwo dhab ah oo runti metela waxaad u taagan tahay.
Xilligii isgaarsiinta multichannel, waligeed muhiim ma ahayn in la horumariyo hab hoggaamineed oo feker ah oo dhab u ah shirkaddaada, ku darida macaamiisha qiime iyo jabaqda. 2021 waxay noqon kartaa sanadkaaga inaad kor uqaado oo lagu maqlo.
Tags: xaqiiqdadaal contentisgaarsiinta dhijitaalka ahHoggaankaomnichannelhogaaminta fikirkaaragti
Suuqgeynta Udubka: Tirakoobka, Sayniska Olfactory, Iyo Warshadaha